Didy navoakan’ny HCC : Manjavozavo, mangata-panazavana ny fiadidiana ny Repoblika -
AccueilRaharaham-pirenenaDidy navoakan’ny HCC : Manjavozavo, mangata-panazavana ny fiadidiana ny Repoblika
31/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Maro no tsy mahazo ilay didy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), ny 25 mey lasa teo. Samy manana ny handraisany sy fahazoany azy ny rehetra ka lasa miteraka resa-be hatramin’izao.
Mazava kosa ny fihetsiky ny avy amin’ny Fiadidiana ny Repoblika. Omaly, dia nametraka taratasy fangataham-panazavana mahakasika iny didy nivoaka iny ny teny anivon’ny HCC ny avy amin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny alalan’ireo mpisolovava azy (Me Tantely Rakotonirina sy Me Charlotte Ramanase).
Nambaran’ireo mpisolovava tamin’izany fa nahazo fampahafantarana ilay didy navoakan’ny HCC ny Filohan’ny Repoblika. “Tsapa fa iny didy iny no ahafahan’ny firenena mivoaka amin’ny krizy, ary ny tsy hiverenan’izany intsony”, hoy ireo mpisolovava.
Nambaran’izy ireo hatrany fa misy manjavozavo ilay didy, ka izay indrindra no mahatonga ny Fiadidiana ny Repoblika mangata-panazavana amin’ny HCC, izay namoaka ilay didy.
Ankoatra izay, voalaza fa teboka roa amin’ilay fanapahana navoakan’ny HCC no tena angataham-panazavana amin’ny HCC. Ny voalohany, mahakasika ny fe-potoana izay voasoritra ao anatin’ilay didy. Ny faharoa kosa indray, ny mahakasika ny fahefan’ny Filoham-pirenena. “Misy tsy mazava mihitsy ao anatin’ilay didy nivoaka ka tsara raha ry zareo avy eo anivon’ny HCC no manazava misimisy kokoa izany, satria samy manana ny fandraisany sy fahazoany azy ny tsirairay araka ny firehana politika, ary izay indrindra anefa vao mainka miteraka sy mampiteraka krizy vaovao eto amin’ny firenena”, hoy ireo mpisolovava.
Notsindrin’ireto mpisolovava ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ireto fa mavesa-danja loatra ny ahafahana manatanteraka tsara iny didy nivoaka iny. Ny HCC anefa, raha ny fanambaran’izy ireo, dia manery handika ilay voalazan’ny andininy faha-54-n’ny Lalàm-panorenana.
Andrasana, araka izany, ny valitenin’ny HCC mahakasika ilay fangataham-panazavana napetraky ny teo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika. Ny fanontaniana mipetraka fotsiny amin’izao fotoana izao ny hoe, mbola voatazona ve izany ilay fe-potoana rehetra voalazan’ilay didy nivoaka iny?
Etsy andaniny, ho an’ny antoko Mapar manokana, dia efa manao tsindry amin’ny fifandresen-dahatra izy ireo, indrindra eo amin’ny resaka fanendrena ny praiminisitry ny marimaritra iraisana sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta, izay ho tombontsoa manokana an’iza?